StaFi Protocol na RockX na-emekọrịta ihe | by Emmanuel Ramsey | Medium
StaFi Protocol na RockX na-emekọrịta ihe
Protocol StaFi nwere obi ụtọ ịkpọsa mmekorita ha na RockX, onye na-ahụ maka ọrụ staking ọkachamara bụ onye na-enye ọrụ nkwado ụlọ ọrụ maka ndị na-eduga blockchain ọha dịka Polkadot, Kusama, Oasis, Solana na Terra.
RockX ga-abanye na mbara igwe StaFi wee kesaa nka ha na nchekwa, ntụkwasị obi na ntọhapụ na oghere blockchain staking.
RockX ga-esonye na netwọk StaFi dị ka Original Validators maka rTokens gụnyere reETH, rDOT, rKSM na netwọk ndị ọzọ ga-akwado. A na-ahọpụta otu nke Original Validators iji hụ na ahọpụtara akara staked na ndị nkwado ntụkwasị obi maka nchekwa nke netwọkụ niile.
Nchọgharị nkwonkwo na sistemu staking mmiri mmiri
N’okpuru mmekorita a, RockX ga-eso StaFi na-arụkọ ọrụ iji chọpụta otu esi emeziwanye nchekwa na nkwụsi ike nke ndị nkwado mbụ niile, si otú a na-eme ka nkwụsi ike nke gburugburu rToken dum. A ga-enye StaFi nzaghachi ngwa ngwa sitere na ndị nrụpụta iji kwalite teknụzụ yana ahụmịhe onye ọrụ.
RockX bụ blockchain staking powerhouse maka iduzi blockchain ọha. Site na nzụlite teknụzụ siri ike yana ọrụ lekwasịrị anya obodo, RockX na-enye ndị na-akwado nchekwa na kwụsiri ike iji mepụta ụgwọ ọrụ dị egwu maka ndị na-ejide akara na-achọ ịkwalite crypto ha. Ugbu a RockX na-enye ọrụ staking maka Polkadot (DOT), Kusama (KSM), Oasis (ROSE), Solana (SOL), IOTEX (IOTX) na ETH2.0.
N’ịkọkọta ọtụtụ ahụmahụ na Ngwuputa Ngwuputa, staking, nyocha protocol, na imepụta akụrụngwa, ike siri ike nke otu RockX na-ewepụta ọrụ atọ dị mkpa na-enyere aka ime ka ndị na-etinye ego, ọrụ na ego na-aga nke ọma. Ọrụ nkwado na staking, Teknụzụ mmepe maka blockchains na Nchọpụta & Mmepe na nzuzo & Weebụ 3.0.
Weebụsaịtị RockX pịa ebe a
4dot partnership with EtherPrint and LiquidSwap to launch Cross Chain Farming on Avalanche
Stockfin Weekly Update 01/21/2022